Dacwad dil ah oo lagu soo oogay Askarigii shaqada ku waayay dhimashada ninka madowga ah | Marsa News
Dacwad dil ah oo lagu soo oogay Askarigii shaqada ku waayay dhimashada ninka madowga ah
Hargeisa:(Marsanews) Nin laga eryay xubinnimada ciidanka booliska Mareykanka kaddib dhimashadii nin madow ah oo aan hubeysneyn ee ka dhacday magaalada Minneapolis ayaa xabsiga loo taxaabay, sida ay saraakiisha sheegeen.
Derek Chauvin wuxuu ka mid yahay afar askari oo shaqada looga eryay sabab la xiriirka dhimashadii Mr Floyd, oo Isniintii geeriyooday isagoo ku jira gacanta booliska.
Mr Chauvin ayaa lagu soo oogay dacwad dil ah.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday mudaharaadyo rabshado iyo boob sababay oo ka dhashay cadhadii laga qaaday muuqaal baraha bulshada ku faafay oo laga arkayay askari jilibka qoorta uga haya George Floyd.
Kiiskan ayaa sii xoojiyay cadhada shacabka Mareykanka ee ku aaddan dilalka ay boolisku u geystaan dadka madowga ah.
‘George Floyd maalin cad ayaa la dilay’
Image captionIlhaan Cumar
Ilhan Cumar oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Wakiillada Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa si kulul uga hadashay dhimashada George Floyd, oo geeriyooday isagoo ay gacanta ku hayaan booliska magaalada Minneapolis.
“George Floyd waxaa magaaladeenna lagu dilay maalin cad.
Waa in dacwad deg deg ah la soo oogo. Caddaalad darrada qotada dheer ayaa sababtay xasilooni darrada bulshada. Nabad ma raadsan karo iyadoo aan caddaalad la helin.
Haddii aanu xeer ilaaliyaha deegaanku u heellaneyn inuu sidaas sameeyo, waa in lasoo magacaabo dacwad ooge khaas ah.,” ayey ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka.